Ozi iji mee ememme izu ụka 2016 na Jerusalem | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, Israel
Na-eru nso Nsọ Week, a pụrụ nnọọ iche oge Ndị Kraịst ebe ọ bụ metụtara ọnwụ na mbilite n’ọnwụ Kraịst. Ọ bụrụ na ogologo oge gara aga ha bụ ụbọchị ezumike na emume dị jụụ, taa, aka na njem, ọtụtụ puku mmadụ na-esi ebe a gaa ebe ahụ na-eji ezumike ndị ahụ ezumike ma ọ bụrụ na ha bụ ndị okpukperechi, gaa ebe mmemme ndị ahụ pụrụ iche.
Echere m na enwere ebe pụrụ iche, metụtara ndụ na ọnwụ Jizọs na na enweghị ihe ọ bụla pụrụ iche karịa itinye izu dị nsọ n’ime ha. Echere m banyere Jerusalem, dịka ọmụmaatụ, ọ ga-abụ nnukwu ihe iji nọrọ izu dị nsọ n'otu ebe ahụ ihe ndị ahụ echere na ha mere. Ka ahụ kedu ka esi eme Ememme Nsọ na Jerusalem na otu ebe obibi anyị nwere:
1 Izu Nsọ Dị na Jerusalem
2 Ka esi aga Jerusalem
3 Ebe ịnọ na Jerusalem
Izu Nsọ Dị na Jerusalem
Oku Obodo udo ekwuwaala Ihe Nketa Uwa site n'aka UNESCO na 1981 na kwa afọ a na-ebi n'ememe okpukpe Ndị Kraịst n'okporo ámá ya. Puku kwuru puku ndị njem nleta na-esokwa Mmasị nke Kraịst n’obodo ahụ niile wee dịrị ndụ n’agbata ụbọchị Palm Sunday, mgbe Jizọs batara Jerusalem, na Ista, mbilite n’ọnwụ ya. Otu izu zuru oke maka Iso Christianityzọ Kraịst dị ọcha.
Nkwụ Sunday bụ Ugwu Oliv, na ndagwurugwu Kidrón, n’ebe ọwụwa anyanwụ nke obodo ahụ. Ndị njem ala nsọ ahụ na-eji ụkwụ aga Chọọchị Betfeji wee si ebe ahụ rute n’ọnụ ụzọ obodo ahụ, na-eso usoro ahụ Jizọs mere ihe karịrị puku afọ abụọ gara aga. Churchlọ ụka Santa Ana dị na Getsemaní bụ nkwụsị na-esote ma mechaa banye obodo site na Puerta de San Esteban. Na Holy Thursday a na-echeta Nri Anyasị Ikpeazụ, oge Oriri Nsọ na ịrara Judas nye, nnukwu mmadụ na Holy Sepulcher ebe a na-asa efere na nleta na Cenacle nke na-emeghe naanị ugboro abụọ n'afọ, na Tọzdee Dị Nsọ na ụbọchị Pentikọst.
Ndị njem ala nsọ ahụ kwesịrị ntụkwasị obi na-aga njem ha na Basilica nke Agony, ebe enwere oke ehihie. N’ụbọchị Fraịdee dị mma ka enwere nnukwu njem njem na Via Crucis site n'okporo ụzọ ruo n'ugwu Golgotha, na-akwụsị mgbe niile n'ọdụ ụgbọ nchegharị. Vigil Saturday bụ oge ichere kpomkwem, mma na Ista Sunday na Mbilite n'ọnwụ Kraịst na-echeta na e nwere njem uka ọzọ na Holy Sepulcher. Mass na procession. Ma ọ bụrụ na ị nwere oge, emume ikpeazụ ga-ewere ọnọdụ ihe dị ka kilomita iri na otu site na obodo ahụ, ebe ọ bụ na Al Qaibe bụ ebe Jisọs ahụ bilitere n’oge na-adịbeghị anya pụtara na nke mbụ ya nye ụmụazụ ya.
Ka esi aga Jerusalem
Un Iberia ụgbọ elu si Madrid gaa Tel Aviv dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ awa ise Ma ebe ọ bụ na anyị abanyeworị na ụbọchị ahụ, a na-ereworị ọnụego bụ isi maka ụgbọ elu n'ụtụtụ, mana na-efe efe na 11 n'abalị ụgbọ elu ahụ nwere ọnụahịa gburugburu euro 165. Enweghị ụgwọ ahụ ọnụahịa dị elu karịa euro 200. Ga-esi Tel Aviv gawa Jeruselem, okporo ụzọ ga-ewe otu awa na ọkara maka na ọ dị naanị kilomita iri isii na ise.
Ị nwere ike si na Tel Aviv gaa Jerusalem na bọs, tagzi ma ọ bụ ụgbọ ala mgbazinye. Ọ bụrụ na ịnọ n'ụlọ nkwari akụ, ị nwere ike ịhazi ya na họtel ka eburu gị, nke doro anya na ego gị.
Ebe ịnọ na Jerusalem
Na mmekọrita ulo enwere ntakịrị ihe niile, site na nkwari akụ ise nwere ụlọ ndị dị ọnụ ala. You nwere ike ịnọ na etiti obodo ahụ, na ọdịda anyanwụ, na nkeji iri na ise Ndị Kraịst ma ọ bụ na Nachla'ot, dịka ọmụmaatụ. M na-eme nchọgharị weebụ na-eche echiche nke ịbịarute Jerusalem na Wenezdee nke 23 iji pụọ na Mọnde nke 28 nke Machị, n'ihi ya, ọ bụ abalị ise na mkpokọta.
Hotelslọ oriri na nkwari akụ atọ so na ndị a 400 na 500 euro maka abalị ise gụnyere ụtụ isi na ụgwọ. Palatin Hotel Jerusalem, Jerusalem Garden Hotel & Spa, Agrjipas Boutique Hotel, na Victoria Hotel, dịka ọmụmaatụ, nwere ọnụahịa ndị ahụ.
N'ihe na-erughị 100 euro ị nwere ụlọ akwụkwọ gọọmenti: thelọ oriri na ọ Youthụ Youthụ ndị ntorobịa nke Citadel, ụlọ mbikọ Abraham, nke ụlọ mbikọ Jerusalem. Ha bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ị bụ nwata ma chọọ ịmụrụ ndị mmadụ, oge niile.
Abraham Hostlọ mbikọ: nwere ezigbo nyocha. Ọ bụghị n'etiti obodo mana ije ije 10 na-efu ihe ọ bụla. Ọ nwere ụlọ mmanya, ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem, kichin enwere ike iji ya mee ihe mgbe niile yana okpokoro ntụsara ahụ na-eji ehi ụra, sofa na oche. Onu ulo ebe nchekwa ihe, ebe ezumike, ebe ndi TV na ebe ana asa akwa Akwa ndị ahụ dị mkpa ma enweghị okomoko, mana ọ bụrụ na ịchọghị imefu nnukwu ego, ọ bụ nhọrọ akwadoro. Lọ obibi nke nwere akwa 10, agwakọtara, na-efu euro 104 ma ọ bụrụ na ịnọ n’etiti ụbọchị iri abụọ na atọ na abali iri abụọ na asatọ. Ọ dịghị ihe ọjọọ. Abalị ise. Site na ụbọchị ahụ enweghizi nhọrọ n'ime obere ụlọ ihi ụra, belụsọ n'ụlọ obibi ụmụ nwanyị dị bed isii nke na-efu euro 23.
Hostlọ Mbikọ Jerusalem: Hostlọ mbikọ a dị na etiti West Jerusalem, nkeji oge site na obodo ochie na ebe nkiri ya. O nwere WiFi n'ime ụlọ ahụ niile, mbara anwụ na-achasi ike, kichin ejikere, oche ndị njem, nnukwu ụlọ ahịa na-acha elekere 24 n'akụkụ ya na nchekwa. Otu ọnụ ụlọ na-efu ihe dị ka euro 50, ego euro abụọ. E reela ụlọ ezinaụlọ ahụ maka Ista, mana akwa dị na ime ụlọ nwoke na-eri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ euro 70 na otu n'ime ime ụlọ nwanyị.
Itlọ nkwari akụ nke Citadel: ụlọ mbikọ a na-arụ ọrụ n'otu ụlọ dị narị afọ asaa a wuru ya n’elu ugwu di elu n’obodo ochie. Echiche dị oke mma, yabụ ikuku. N'etiti 2009 na 2013 a ụlọ mbikọ a hoputara dị ka otu n'ime ụlọ ise kacha mma na Jerusalem. Ọ dị nkeji abụọ site na ahịa ndị dị na mpaghara, ise sitere na ofka nke Holy Sepulchre, West Wall na ọtụtụ ebe akụkọ ihe mere eme. Gwọ Otu ihe ndina dị n’ụlọ ndina 12 na-akwụ euro 106 maka abalị ise. Nwere ike ịhọrọ ịrahụ na mbara ala ma kwụọ ụgwọ obere, ihe dị ka euro 57. Otu onye nwere ụlọ ịsa ahụ nkeonwe na-efu euro 215 na okpukpu abụọ ya na ime ụlọ ịwụ ahụ, euro 359. Ọ bụrụ na ịchọrọ ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe, ọ dị oke ọnụ: ime ụlọ nwere akwa abụọ na ime ụlọ ịwụ ahụ nkeonwe 431 euro.
Ka nwere oge iji hazie njem dị mkpirikpi na isi nke Iso Christianityzọ Kraịst. Usen itiokiet ye okoneyo ition ndụ Christ ọ bụla oge nke ụbọchị na usọrọ Easter 2016 n'ụzọ pụrụ iche.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Ozi iji mee ememme izu ụka 2016 na Jerusalem
Ihe ị ga-ahụ na London n'efu